Kismaayo News » Xamar oo lagu soo toosay xoolo qalan oo dariiqyada waran
Kn: Xaafadda Hawl-wadaag ee magaalada Muqdisho ayaa saaka lagu soo waabariistay ido gawracan oo dariiqyada daadsan, kuwaasi oon la garanayn meel ay kayimaadeen, cidda daadisay iyo waliba ujeedka ka danbeeya.
Laanta Beermuuda ee xaafadda Hawl-wadaag ayaa ilaa iyo 18 ari ah, nooca idaha oo gawracan ayaa hiraabtii lagu arkay ayagoo jidcaddeyaasha daadsan, waxayna noqotay arin ay dadku ka argagexeen. Dadka qaar ayaa u fasilay inay arintani tahay sixir aan la ogayn cidda loola jeedo, halka dadka qaar ay leeyihiin waa nooc kamid ah ficillada ay sameeyaan dadka jinka iyo shaydaanka caabuda.
Marka la dib loo raad raaco dhaqamada Soomaalidii hore idaha waxaa loo isticmaali jiray marka beeli aysan doonayn inay nabad ka qaadato dhacdo ama waanwaan laga dhexwado ayaga iyo beel kale oo ay is hayaan, laakiin ficilka saaka lagu arkay xaafad kamid ah Muqdisho wuxuu noqonayaa mid ugub ah oo ku cusub caasimadda iyo waliba dhaqanka Soomaalida.
Waxa ay tahayba, waxaa shacabka ka agdhaw ama ku nool xaafadaas la gudboon inay Alle ka magangalaan sharta cidda falkani ka danbaysay iyo waxa ay uga gol-leeyihiin labadaba.